Cabsigelinta galmada waxay bedeshaa maskaxda | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Waxbarashada Xaaladda Galmada
Qaan-gaarnimadu waa mudada horumarkeenna marka maskaxdeennu ay diyaar u yihiin inay noqdaan kuwo ku xeel-dheer galmada (ama barnaamij) iyadoo loo diyaar-garoobayo qaan-gaarnimada. Xaaladdaasi waxay ku dhici kartaa iyada oo lala xiriirinayo asxaabta nolosha dhabta ah iyo / ama la macaamilidda filimada internetka. Barashadani waxay si toos ah u dhisi doontaa dariiqyo neerfaha oo aad u dhakhso badan. Waxay dib u qaabayn ku samayn doontaa maskaxdeena iyo sida aan u aragno galmada iyo jacaylka mustaqbalka. Waxaas oo dhami waxay ku saleysan yihiin waxa aan baranayno xilligan muhiimka ah ee horumarka. Way adkaan kartaa in laga ruxo caado si qoto dheer u xididaystay oo lagu sameeyay waqtigan marxalad dambe.
Ilaa intaan internetka la helin, dhallinyaradu waxay dhuumasho ku dhajinayaan joornaalada ama DVD-yada, oo maskaxda ku haysa oo si kedis ah ula jeeda jinsi. Waxay "dhaaminayaan" fiirin sababtoo ah waxyaabahaas oo kale ayaa loogu talagalay dadka qaangaarka ah. Badanaa waxaa qarsoonaa meel ka baxsan aabayaasha, walaalaha waaweyn ama kuwa dukaanka ah. Waxay si sahlan u isticmaali lahaayeen fikirkooda inay ka fekeraan caanka ama gabdhaha fasalkooda si ay u sii daayaan xiisadaha galmada. Intii ay bilaabeen inay la qabsadaan waxyaabo badan oo ragga iyo dumarka kale ah, waxay ku wareegi lahaayeen marmarka qaarkood ee maskaxeed oo caqli-gal ah si ay u sahamiyaan maydkooda midba midka kale oo u horseedaya is-qabsiga galmada.
Maanta dhalinyarada badankood waxay 'bilaabaan' weydiimahooda galmada iyagoo wata jilicsanaan adag si ay u shidaal qaataan riyadooda. Kuma bilaabaan sawirrada jilicsan ee jilicsan ee haweenka u labbisan dharka ee ku soo dhaca halkan. In ka badan 80% waxyaabaha lulataaye waxaa ku jira rabshad lidi ku ah dumarka. Waxyaabaha xanuunka leh, naxdinta leh ayaa sidoo kale ku kicin kara galmada gaar ahaan maskaxda qaan-gaarka ah maxaa yeelay waxay leedahay marin ka sarreeya xamaasadda noocan oo kale ah marka loo eego ilmaha ama maskaxda dadka waaweyn. Dadku waxay ku arki karaan waxyaabo aad u daran hal fadhi oo taleefannadooda casriga ah marka loo eego awoowayaashood inta ay nool yihiin arki karaan. Saamaynta qulqulka qaawan ee asaliga ah ayaa dib u qaabeeya maskaxda iyo shaqadeeda.
Maskaxdu looma habeeyo luuqada
Maskaxdeena ma aysan habaynin si ay ula macaamilaan sunami tan qalabka loo yaqaan 'hypermimulating materials' kaas oo la heley tobankii sano ee la soo dhaafay sababtoo ah imaanshaha internet-ka ee barta internetka. Saameynta ugu weyn ee caafimaadka ee dhalinyarada iyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ayaa ah: niyad-jabka; welwelka bulshada; go'doonka bulshada; qulqul maskaxda; daaweynta khasabka ah ee sawir-qaadidda internetka inkastoo ay jirto cillado aan fiicnayn iyo cilad xumo.
Maxay tahay maskax si ay u sameeyso marka ay leedahay helitaan aan xadidneyn oo ah abaalmarin jilicsan oo suurtagal ah inaysan waligeed ka gudanin in ay xakamayso? Qalabka qaarkood waxay u qabsoomaan - oo maaha hab wanaagsan. Hawlgalku waa tartiib tartiib. Marka ugu horeysa, isticmaalka lebbiska iyo xajinta orgaanku wuxuu xalliyaa khilaafka jinsiga iyo diiwaangelinta sida ku qanacsan.
Laakiin haddii aynnu sii dheeraanno nafteenna, maskaxdeena ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay naga hor yimaadaan. Waxay iska difaacaysaa dopamine xad dhaaf ah iyadoo hoos loo dhigayo jawaabta ay u leedahay, waxaanan dareemeynaa wax yar oo aan yareyn. Dareenkan hoos u dhaca dopamine wuxuu u riixayaa dadka isticmaala raadinta xitaa si dheeraad ah loo raadsado, taas oo ah, marka laga hadlayo, isbedelka joogtada ah, isbeddel dhabta ah ee maskaxda. Waxay noqon karaan kuwo caqabad ku noqda inay noqdaan kuwo ka soo horjeeda.
Waa maxay sababta ay sidaas tahay? Muxuu ka duwan yahay leexashada waagii hore?
<< Xusuus & Barasho Markii Ugu Horaysay Oo Lasoo Bandhigo Galmada >>